Ku saabsan Us-Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Dongguan Zhihao Boorsada Wershadaha Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2005. Waxay si dhow ula socotaa isbeddelka horumarka warshadaha iyo sannadaha maaraynta xoogga leh. Waxaa loo sameeyay shirkad dhammaystiran oo isku dhafan R&D, qaabeynta, soo saaridda iyo iibinta boorsooyinka iyo boorsooyinka. Mid ka mid ah shirkadaha miisaanka u leh warshadaha bagaashka. Waxay ka korortay dhowr iyo toban qof bilowgii aasaaskeeda waxayna noqotay shirkad weyn oo bagaashka qaada oo ka badan kun shaqaale, aag dhisme ka badan 80,000 mitir murabac ah, iyo wax soo saar sanadle ah oo gaaraya 6 milyan.
Dongguan Zhihao Shandada Wershadaha Co., Ltd. waxay had iyo jeer u hoggaansan tahay ruuxda shirkadeed ee "daacadnimo deggan, wehel daacad ah", iyada oo la raacayo fikradda iskaashiga ee "faa'iido wadaag, ixtiraam iyo kalsooni, horumar iyo guul-guul" iyo "wanaagsan alaabooyinka, adeegyo wanaagsan, macaamiil wanaagsan, iyo kalsooni mabaadi'da ganacsiga "" Wanaagsan ", horumarka isdaba-joogga ah iyo hal-abuurnimada, taasoo horseedaysa isbeddelka warshadaha bagaashka. Shirkadda ayaa sidoo kale ka gudubtay shahaadada caalamiga ah ee SGS.
Dongguan Zhihao Handbag Industrial Co., Ltd. had iyo jeer waxay soosaartaa inta badan: bacaha ganacsiga, bacaha kombiyuutarka, bacaha raaxada, bacaha dhexda, boorsooyinka, boorsooyinka safarka, bacaha buuraha iyo alaabada kale ee caadiga ah iyo bacaha dukumiintiga, bacaha musqusha, shandadaha, furaha sirta, Maaskarada indhaha, gacmaha qoorta, daboolka sanduuqa, suumanka iyo shandadaha kale iyo alaabada qalabka.